NextMapping | Ny hoavin'ny bilaogin'ny asa
Search by Date Fidio ny daty Desambra 14, 2020 Novambra 18, 2020 Oktobra 22, 2020 Oktobra 8, 2020 Aogositra 27, 2020 Aogositra 18, 2020 Jolay 7, 2020 Enga anie 22, 2020 Aprily 21, 2020 Aprily 13, 2020 March 31, 2020 March 25, 2020 March 16, 2020 March 13, 2020 Febroary 11, 2020 Febroary 4, 2020 Janoary 2, 2020 Desambra 19, 2019 Novambra 25, 2019 Novambra 19, 2019 Novambra 14, 2019 Novambra 4, 2019 Oktobra 24, 2019 Oktobra 6, 2019 Septambra 18, 2019 Septambra 5, 2019 Aogositra 29, 2019 Aogositra 17, 2019 Jolay 23, 2019 Jolay 4, 2019 Jolay 2, 2019 Jona 21, 2019 Jona 14, 2019 Enga anie 27, 2019 Enga anie 6, 2019 Aprily 23, 2019 Aprily 11, 2019 March 25, 2019 March 12, 2019 March 11, 2019 Febroary 28, 2019 Febroary 14, 2019 Febroary 5, 2019 Janoary 29, 2019 Janoary 15, 2019 Janoary 3, 2019 Desambra 5, 2018 Desambra 3, 2018 Novambra 20, 2018 Novambra 6, 2018 Oktobra 30, 2018 Oktobra 14, 2018 Septambra 29, 2018 Septambra 19, 2018 Septambra 12, 2018 Septambra 5, 2018 Aogositra 27, 2018 Aogositra 17, 2018 Aogositra 1, 2018 Jolay 26, 2018 Jolay 23, 2018 Jolay 11, 2018 Jolay 9, 2018 Jona 28, 2018 Enga anie 21, 2018 Aprily 26, 2018 Aprily 11, 2018 March 20, 2018 Febroary 28, 2018 Febroary 20, 2018 Janoary 31, 2018 Janoary 9, 2018 Janoary 3, 2018 Desambra 11, 2017 Desambra 4, 2017 Novambra 11, 2017 Oktobra 23, 2017 Oktobra 16, 2017 Septambra 12, 2017 Septambra 7, 2017 Aogositra 25, 2017 Jolay 26, 2017 Jolay 19, 2017 Jona 15, 2017 Jona 7, 2017 Enga anie 23, 2017 Enga anie 4, 2017 Enga anie 2, 2017 Aprily 18, 2017 Aprily 5, 2017 March 21, 2017 March 10, 2017 March 1, 2017 Febroary 20, 2017 Febroary 7, 2017 Janoary 17, 2017 Janoary 6, 2017 Desambra 14, 2016 Desambra 9, 2016 Novambra 21, 2016 Novambra 16, 2016 Oktobra 28, 2016 Oktobra 12, 2016 Oktobra 3, 2016 Septambra 23, 2016 Septambra 14, 2016 Aogositra 22, 2016 Aogositra 12, 2016 Jolay 19, 2016 Jona 28, 2016 Jona 22, 2016 Jona 13, 2016 Enga anie 17, 2016 Enga anie 12, 2016 Enga anie 2, 2016 Aprily 25, 2016 Aprily 7, 2016 March 29, 2016 March 14, 2016 March 12, 2016 Febroary 10, 2016 Janoary 19, 2016 Janoary 17, 2016 Desambra 29, 2015 Desambra 13, 2015 Desambra 8, 2015 Novambra 27, 2015 Novambra 23, 2015 Novambra 19, 2015 Novambra 9, 2015 Oktobra 14, 2015 Septambra 16, 2015 Aogositra 28, 2015 Aogositra 14, 2015 Aogositra 6, 2015 Jolay 27, 2015 Jolay 15, 2015 Jona 10, 2015 Enga anie 11, 2015 Aprily 1, 2015 March 23, 2015 March 11, 2015 Febroary 8, 2015 Febroary 3, 2015 Janoary 18, 2015 Desambra 23, 2014 Desambra 8, 2014 Oktobra 29, 2014 Oktobra 24, 2014 Oktobra 8, 2014 Oktobra 3, 2014 Septambra 9, 2014 Septambra 4, 2014 Aogositra 29, 2014 Aogositra 28, 2014 Aogositra 27, 2014 Jona 25, 2014 Jona 12, 2014 Enga anie 25, 2014 Enga anie 16, 2014 Enga anie 15, 2014 Enga anie 13, 2014 Enga anie 8, 2014 Aprily 24, 2014 Aprily 17, 2014 Aprily 14, 2014 Aprily 11, 2014 March 28, 2014 March 19, 2014 Febroary 27, 2014 Febroary 20, 2014 Febroary 4, 2014 Febroary 3, 2014 Janoary 16, 2014 Desambra 6, 2013 Novambra 14, 2013 Novambra 8, 2013 Septambra 19, 2013 Septambra 16, 2013 Septambra 5, 2013 Aogositra 22, 2013 Aogositra 18, 2013 Jolay 20, 2013 Enga anie 20, 2013 Aprily 20, 2013 March 20, 2013 Febroary 20, 2013 Janoary 20, 2013 Desambra 23, 2012 Desambra 20, 2012 Novambra 23, 2012 Novambra 20, 2012 Oktobra 20, 2012 Septambra 20, 2012 Aogositra 20, 2012 Jolay 23, 2012 Jolay 20, 2012 Jona 20, 2012 Enga anie 20, 2012 Aprily 20, 2012 March 20, 2012 March 3, 2012 Febroary 23, 2012 Febroary 20, 2012 Janoary 28, 2012 Janoary 23, 2012 Janoary 21, 2012 Janoary 20, 2012 Janoary 19, 2012 Desambra 22, 2011 Desambra 20, 2011 Novambra 20, 2011 Oktobra 20, 2011 Septambra 20, 2011 Aogositra 20, 2011 Jolay 20, 2011 Jona 20, 2011 Enga anie 20, 2011 March 20, 2011
Search by SOKAJY Select Category1 Toeram-pifidianana safidinyGeneration 3ArticleNy tsara indrindra amin'ny bilaogyBlogBusinessSolutions CEOmanova fitarihanafitantanana fitantananaFiovana fitantanana ho an'ny taranakaRaharaha fahalalànaEvolisiona mpitarikaNy ho avin'ny asaEtsy eran'izao tontolo izao ny Gen YGeneration XGeneration YGenerations sy teknolojiaTaranaka any amin'ny toeram-piasanaFanavaozana sy fahaiza-mamorona eo amin'ny toeram-piasanaFanavaozana ao amin'ny toeram-piasanaFampidirana ny teknolojia amin'ny serasera amin'ny famoahana ny fahaiza-manaon'ny olonaMpanolotsaina mpitarikaPaikady mpitarikaTorohevitra mpitarikaMitarika toeram-piovana fanovanaMitarika toeram-piasana marobeMitarika ny taranakaMediafanovana fandaminanaIreo fomba fiasaNy toeram-piasana 2020TrendingUncategorizedHanavao ny OS amin'ny mpitondra
Ity ny zavatra tokony ho jerena amin'ny 2021
Ity no andrasana amin'ny 2021. Tamin'ny taona 2020 dia niova tanteraka ity tontolo ity - ny fomba fiasantsika - ny fomba fiainantsika ary ny fomba fijerintsika ny ho avy. Amin'ny taona 2020 isika rehetra dia afaka manaiky fa miaina fihenjanana kely isika rehetra. Ny maha-olombelona dia miaina adin-tsaina. Ny […]
Ny asantsika amin'ny areti-mandringana dia ny tsindry azon'ny olona ambany
Efa nipaoka anao ve ny 2020 ao amin'ny fantatrao? Ity no anjarako amin'ny fomba ahafahako / isika mifantoka amin'ny maha-olombelona antsika mandritra ny areti-mandringana. Tsy fantatro ny momba anao fa ny 2020 dia kitra lehibe teo amin'ny fipetrahan'ny pataloha. Toa sahala amin'ny hoe niaritra be ny adin-tsaina noho ny valanaretina […]
Nandre resaka be momba ny 'ara-dalàna vaovao' isika hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana. Raha ny tena izy dia tsy misy tena mahalala hoe hanao ahoana izany normal vaovao izany. Amin'izao fotoana izao dia mandalo revolisiona sosialy isika. Ny areti-mandringana dia mahatonga ny mpiasa hamerina hijery ny dikan'ny asa amin'izy ireo tsirairay. Nampifanarahin'ny mpampiasa […]
Fandinihana momba ny fiantohana: Fomba 5 hiasa haingana
Fandalinana trangam-piantohana: Fomba 5 hiasa lavitra avy amin'ny toeran'ny mpitsidika nataon'i Crystal Metz - Crystal koa dia mpanazatra mpandraharaha NextMapping mpandraharaha miara-miasa amin'ireo mpandraharaha mba hahitana izay manaraka ho an'ny fahombiazana bebe kokoa. Ny fiasana lavitra, na ny fitantanananao ny orinasanao, ny fitantanana ny mpiasa ary ny fampifaliana ny mpanjifa ao an-trano dia mety ho sarotra ihany ny miteny […]
5 hacking an'ny mpitarika ho an'ny fanamby lehibe indrindra WFH (asa avy amin'ny trano)
Amin'ity lahatsoratra bilaogy ity dia mizara hacks leadership 5 aho ho an'ireo fanamby WFH (asa avy any an-trano) mahazatra indrindra. Tamin'ny antso Zoom vao haingana niaraka tamin'ny CEO iray dia niresaka momba ny zavatra mitazona azy sy ireo mpitarika azy amin'ny alina mandritra ny areti-mandringana. Ireo fanamby natrehin'izy sy ireo mpitarika azy dia nitovy […]
8 Ny Lohazo dia afaka manohana ny asany ny mpitondra mba handroso amin'ny fotoan'ny tsy fahatokisana
Misy fomba 8 ahafahan'ny mpitarika manohana ny mpiasan'izy ireo hiroborobo amin'ny fotoanan'ny tsy fahatokisana mafy. Vao tsy ela akory izay ny mpanjifa iray dia nizara fa sahirana izy amin'ny fitazomana ireo mpikambana ao amin'ny ekipany ho tafiditra. Nizara ihany koa izy fa ny olan'ny mpiasa dia notanterahin'izy ireo hifantoka amin'ny asany ary hamokatra. Tsy misy ny boky filalaovana raha te hahomby amin'ny fifanatrehana […]
Vao haingana aho dia vahiny tamin'ny serivisy podcast podcast miresaka momba ny ho avin'ny asa sy ny herin'ny marika.
Ahoana no fomba ifantohan'ny mpitarika mba hitarika amin'ny famoronana Covid-19
Aprily 21, 2020
Omaly dia nanontany aho ny fomba fisondrotry ny mpitondra mba hitarika amin'ny fikorontanan'ny Covid-19.
Eo afovoan'ny Coronavirus - Ahoana ny fahatsapanao ny ho avy?
Nandefa fanontaniana tamin'ny besinimaro nanontany izahay hoe: “eo afovoan'ny virus coronaavanao, manao ahoana ny fahatsapanao ny ho avy? Mbola miditra ny angona ary rehefa vita ny fanadihadiana dia ho hitanao ny valiny. Ireto ambany ireto dia mizara ny valiny voalohany. Ny fanontaniana napetraka taminay dia misy: Mahatsapa ho be fanantenana ve ianao amin'ny […]
Ny Coronavirus dia manafaingana ny hoavin'ny asa
Ny futurista rehetra dia miresaka momba ny fanakorontanana ary vonona ny hanakorontana - fikorontanana iray fantatsika tsara fa ny Coronavirus dia manafaingana ny hoavin'ny asa. Rehefa mizatra amin'ny asa lavitra ny olona, ​​dia misy ny fanamby vaovao ary hipoitra ny fotoana ara-toekarena vaovao. Betsaka ny fampahalalana momba ny coronavirus ary isan'andro […]
Fampianarana an-tserasera vaovao - Ahoana no fomba hamoronana & havaozina amin'ny hafainganam-pandehan'ny fanovana
Tena faly izahay manampy fampianarana vaovao an-tserasera - "Ahoana no fomba hamoronana & hanavaozana amin'ny hafainganana ny fanovana". Tamin'ny volana febroary dia nanampy izahay hoe, "Ny hoavin'ny fandraisana sy fihazonana talenta ambony" amin'ny làlana. Ny lalam-baovao, "Ahoana no fomba hamoronana sy hanavaozana ny hafainganana amin'ny hafainganana" dia natao hanampiana ireo mpitarika, mpikambana ao amin'ny ekipa, […]
Ny fiakaran'ny asa an-tany lavitra amin'ny taona 2020 - Ahoana no fomba hahombiazany amin'ny orinasa misy anao
Rehefa manoratra aho dia ao anatin'ny areti-mifindra coronavirus isika. Eo am-piakaran'ny asa lavitra isika amin'ny taona 2020. Mihidy ny sekoly, mihidy ny trano fisakafoanana na nanova serivisy mba hivoahana fotsiny, ny mpivarotra toa an'i Apple dia nanidy fivarotana ary ny indostria rehetra dia voakasik'ity fanakorontanana lehibe ity. 5 taona […]
Ampiasao ny maodely PREDICT mba hanamorana ny ahiahy momba ny ho avy
Ao anatin'ny matevina amin'ny areti-mandringana Covid-19 izahay ary manahy ny rehetra, mahatsiaro ho jamban'ny rehetra ny fiatraikany amin'ny toekarena manerantany. Afaka mampiasa fitaovana toy ny maodely PREDICT isika hanampiana hanamaivana ny fanahiana amin'ny ho avy. Voakasik'izany avokoa ny indostria ao anatin'izany ny indostrian'ny fizahan-tany, ny indostrian'ny fivoriana ary ny famatsiana […]
Ny Ho avy nozarina
Jason Campbell avy amin'ny MindValley dia nanadihady an'i Cheryl Cran momba ny 'fitarihan-tena' ilaina hamoronana ho avy iraisana. Mba hihainoana ny rakipeo feno amin'ity dinidinika ity dia mandehana eto. Jason: Manana an'i Cheryl Cran eto aho, izay, indrisy, hiresaka tsara momba ny hoavin'ny asa isika ary ny ho avy dia […]
Ny hoavin'ny fanandramana mpanjifa
Inona ny ho avy iainan'ny mpanjifa? Taona vitsivitsy lasa izay dia niara-niasa tamin'ny orinasa teknolojia iray izay nanao kaonferansa fankasitrahana ny mpanjifa aho. Ny fifantohan'ireo kaonferansa dia ny fanomezana ireo mpanjifa orinasa teknolojia fitaovana sy loharanon-karena vaovao hitrandrahana ny teknolojia. Nangatahana aho hanan-danja ireo hetsika ireo ao amin'ny […]
Manomboka ny folo taona vaovao IZAO ary ny taona 2020 dia taona fanatsarana ny tenantsika. Fotoana izao ho an'ny tsirairay amintsika hampitomboana ny fanolorantenantsika ho olona tsara kokoa, mpilalao ekipa tsara kokoa ary mpitarika tsara kokoa. Azonao atao ve ny mahatsapa ny mahamaika an'io? Azonao atao ve ny mahatsapa ny fisintahan'ny ho avy mangataka anay […]
Mankalaza ny 2019 amin'ny NextMapping
Mankalaza eto amin'ny NextMapping isika satria efa hifarana ny 2019. Tamin'ny taona 2019 ny bokiko, "NextMapping - Anticipate, Navigate and create The Future of Work" ARY namorona ny andiany faha-2 miaraka amin'ny boky fiasa manokana izay havoaka amin'ny volana febroary 2020. Nampitombo ny fahombiazan'ny mpanjifa mpanolotsaina tamin'ny taona 2019 ny fanekena ny fitarihana mpitarika. Ao amin'ny […]
Digital, Change ary ilay modely PREDICT Chris Rainey fanadihadiana amin'ny Cheryl Cran
Androany dia nahafaly ahy ny tafatafa naterak'i Chris Rainey mpanorina ny HRleaders.com momba ny hoavin'ny asa, nomerika, fanovana ary ny maodely PREDICT avy amin'ny bokiko, "NextMapping - Anticipate, Navigate and Create The Future of Work". Ny dinidinika dia nifantoka tamin'ny ho avy miovaova haingana sy ny fomba ahafahan'ny mpitondra mampiasa ny maodelin'ny PREDICT […]
Ahoana no fomba hahitana mpiasa mandray anjara
Tao amin'ny NextMapping dia nandinika mpitondra maro an'arivony izahay ary ny iray amin'ireo olana goavana atrehin'ireo mpitondra dia ny "fomba fampidirana mpiasa hiasa". Vao tsy ela akory izay dia nanao atrikasa maromaro ho an'ny BMO Bank of Montreal manerana an'i Canada aho. Nandeha tany Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver, Montreal, ary Toronto izahay. Nifantoka tamin'ny hoavin'ny asa […]
Iray amin'ireo fironana ho an'ny asa ho an'ny asa 2020
Vao haingana izahay no namoaka ny tatitra nohavaozina momba ny Top 20 Trends for Future of Work 2020. Ity lahatsoratra ity dia mifantoka amin'ny iray amin'ireo fironana amin'ny ho avin'ny asa 2020. Ny iray amin'ireo fironana nokarohinay dia misy ny fifantohana amin'ny fanovana nomerika amin'ny alàlan'ny mason'ny 'olona voalohany '. Mpitarika maro nohadihadianay no nilaza […]
Ahoana ny fomba hampijanonana ny fisalasalana amin'ny toeram-piasana
Namotopototra mpitondra an'arivony izahay ary ny iray amin'ireo fanamby lehibe nambara dia ny: Ahoana ny fomba hampijanonana ny fisalasalana any amin'ny toeram-piasana. Manaraka Fanadihadiana momba ny saritany Ny fiovan'ny haitao sy ny fandraharahana mahasarika ka mahatonga ny mpiasa hiasa amin'ny famoronana ny ho avy. Ny fanamby ataon'ny mpiasa dia misy fanovana mitohy ary tsy matoky ny mpitondra azy ireo […]
Tsy misy “fahaiza-manao malefaka” intsony?
Ny teny hoe "fahaiza-manao malefaka" dia midika hoe malemy na tsy ilaina ary hoy aho hoe: 'Tsy misy fahaizana malefaka intsony!'. Misionera aho! Efa folo taona mahery aho no nanao ity iraka ity! Manantena aho fa hiaraka amiko ianao. Ny iraka dia ny fananana ny teny hoe "fahaiza-manao malefaka" ho soloina teny vaovao toy ny hoe "ilaina […]
Vonio ny hoavy amin'ny alàlan'ny fananganana modely
Tsy misy baolina kristaly fa misy tsiambaratelo fantatry ny mpikotrana - afaka maminavina ny ho avy ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba. I Abraham Lincoln no nilaza fa, "ny fomba tsara indrindra haminany ny ho avy dia ny famoronana azy". Amin'ny NextMapping izahay dia manampy anao haminany ny ho avy amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba. Ao amin'ny bokiko, “NextMapping - Antidiho, […]
Ity fiovana lehibe ity dia hamorona ny ho avin'ny asa
Manoratra izany avy amin'ny seranam-piaramanidina Minneapolis izay nahavitako andian-teny fototra ho an'ny mpanjifa amin'ny indostrian'ny famindrana mpiasa, ny mpanjifa amin'ny indostrian'ny fiarovana ary ny mpanjifa ao amin'ny governemanta federaly. Na dia toa tsy mitovy sy tsy itoviana amin'ireo indostria ireo aza ny marina dia ny indostria tokana tokana dia manana fitoviana […]
Ny mpiasa ny ho avy
Tsy misy fanontaniana fa ny mpiasa amin'ny ho avy dia ho mpiasa miasa mifanaraka. Ny mpiasa amin'ny ho avy dia ho hafa tanteraka noho ny ankehitriny. Fironana maromaro no manondro ny fiovana misy fiantraikany amin'ny hoavin'ny toeram-piasana. Ao amin'ny bokiko, "NextMapping - Andraso mialoha, hamakivaky ary hamorona ny ho avy […]
Ny ho avy dia mila mpitarika miaraka amin'ny toetran'ny lahy sy ny vavy
Ny ho avy dia mila mpitondra manana toetra lahy sy vavy. Ao amin'ny fotoana sy toerana tena lehibe eo amin'izao tontolo izao isika. Isan'andro isika dia mahita ohatra amin'ny fitarihana lehibe sy tsy dia lehibe ataon'ny lehilahy sy ny vehivavy, na amin'ny orinasa, manomboka na politika. Ny toetran'ny mpitarika taloha dia ny toetran'ny lahy indrindra []
Matoky ny mpitondra azy ve ny olonao?
Manana fanontaniana aho: matoky ny mpitondra azy ve ny olonao? Raha eny no navalinao - tsara izany fa vonona ny ho avy ny orinasanao! Misy ny fikarohana tohanan'ny siansa izay manaporofo fa ny kolotsaina fitokisana dia manana taham-pisondrotana ambony sy tombontsoa hafa. Paul J. Zak mpikaroka iray ao Harvard dia nandinika ny fifandraisana misy eo amin'ny fifampitokisana, ny fitarihana ary […]
Fiantohana any amin'ny toeram-piantohana miasa 2025
Indostria maro, ao anatin'izany ny fiantohana, no mizatra haingana amin'ny fiovana maro misy fiatraikany amin'ny fiantohana amin'ny ho avy 2025. AI, mandeha ho azy, robotika, manova ny toetran'ny mpiasa dia misy akony haingana amin'ny ho avin'ny fiantohana. Ilaina ny fananan'ny mpitondra fahaiza-manavao toy ny fahaizana manana fomba fijery marobe. Mila mahay mitondra ny mpitondra […]
Ahoana no fomba hiomanana amin'ny ho avy - dinidinika amin'i Amber Mac
Cheryl Cran: Tena faly aho anio, manana an'i Amber Mac ho vahiny eto amintsika. Amber azafady mba zarao amin'ny mpanjifanay ny mombamomba anao. Amber Mac: Misaotra anao fa efa ho 20 taona izao aho no niasa tamin'ny sehatry ny teknolojia. Nanomboka niditra tao anaty tsimparifary aho tamin'ny fanombohana teknolojia roa tao San Francisco. Manana asa fanaovan-gazety aho […]
Ahoana no handrebireby ny fotoana amin'ny Flux
Tototry ny fiovana goavana ve ianao? Midira amin'ny klioba! Ao anatin'ny vanim-potoana tsy maintsy ilaina isika rehetra hihatsara kokoa amin'ny fianaran-javatra amin'ny fomba hivoahana amin'ny fotoanan'ny flux. Famaritana ny 'flex': Mamindra na mihenjana Famaritana ny 'flx': Synonymie ho an'ny 'fanovana' Ny hafainganan'ny fiovana sy ny fampahalalana izay ataonay […]
1 2 ... 72 Manaraka>